सन् २००७ देखि पत्रकारितामा सक्रिय लामिछाने नागरिक न्यूजका समाचार संयोजक हुन्। उनी सामाजिक, राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन्।
८ वर्षमा कहाँ हरायो फेवातालको १६ सय १९ रोपनी जमिन ?
वितेको आठ वर्षमा फेवातालको क्षेत्रफल १६ सय १९ रोपनी घटेको पाइएको छ। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार हाल तालको क्षेत्रफल ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा छ ।
प्रशान्त लामिछाने १७ फाल्गुन २०७७ सोमबार ३ मिनेट पाठ
प्रशान्त लामिछाने ७ फाल्गुन २०७७ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
सायद एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण भएको भए सन्तोष साहको जीवनले नयाँ मोड लिने थियो। तर उनले आफ्नो शैक्षिक जीवनमा त्यो सपना पुरा गर्न पाएनन्। घरको आर्थिक अवस्थाका कारण उनलाई सानै उमेरमा दवाव पनि थियो।
प्रशान्त लामिछाने ३० मंसिर २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
जब चिनीले रुवाउँछ...
गत वर्ष यहीबेला उखु किसान काठमाडौं आएका थिए। उनीहरुको एउटै मात्र माग थियो, 'हाम्रो उखु किन्ने पैसा दिनुपर्यो।' मिलका मालिकले किसानको उखु पेलेर चिनी निकाले, चिनी बेचेर नाफा पनि निकाले।
प्रशान्त लामिछाने २८ मंसिर २०७७ आइतबार ३ मिनेट पाठ
कमानसिंह लामा : राजनीतिदेखि कूटनीतिसम्म
कमानसिंह लामाका अनेक व्यक्तित्व थिए। मूलतः उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक निष्ठावान् सिपाही थिए। तर उनको व्यक्तित्व यतिमा मात्र सीमित भएन। आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म सक्रिय लामा एक कूटनीतिज्ञसमेत हुन् भने ‘करिअर’का सुरुवाती दिनमा कुशल शिक्षक।
प्रशान्त लामिछाने २५ मंसिर २०७७ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
प्रशान्त लामिछाने २४ मंसिर २०७७ बुधबार २ मिनेट पाठ
१४ वर्ष पहिले आजकै दिन नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले युद्ध बिसाउने र नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रशान्त लामिछाने ५ मंसिर २०७७ शुक्रबार ७ मिनेट पाठ
बुधबार मध्यान्ह करिव १ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको विमान ल्यान्ड भयो। उक्त विमानमा को को छन्? कति जना छन्? भन्नेबारे विमानस्थल कर्मचारीसमेत जानकार थिएनन्।
प्रशान्त लामिछाने ६ कार्तिक २०७७ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिने विषय बिहानैदेखि चर्चा भइरहेको थियो। घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो।
प्रशान्त लामिछाने ३० भाद्र २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
प्रशान्त लामिछाने २७ भाद्र २०७७ शनिबार ४ मिनेट पाठ
गत हप्ता मात्रै कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका एक बैंकका कर्मचारीले आफ्नो कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि बिमा गरेको कम्पनीमा दावी पेश गरे। तर उनले बिमा समितिको मापदण्ड थाहा पाएपछि अहिले बिमा रकम नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
प्रशान्त लामिछाने १९ भाद्र २०७७ शुक्रबार २ मिनेट पाठ